१० सेकेन्डसम्म एउटा खुट्टामा उभिन नसक्नेलाई मृत्युको जोखिम उच्च « dainiki
९ असार, लन्डन । तपाइँमा एउटा मात्र खुट्ट टेकेर केही बेर उभिने बानी छ कि छैन् ? यदि छैन् भने केही सेकेन्डका लागि भए पनि उभिने प्रयास गर्ने कि ? किनकी एउटा पछिल्लो अध्ययनले कम्तीमा १० सेकेन्ड एउटा खुट्टामा उभिन नसक्ने वयस्क व्यक्तिमा मृत्युको जोखिम हुने गर्छ । ब्रिटिश जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित अध्ययनमा यस्ताे दाबी गरिएको हो ।
प्रकाशित मिति : ९ असार २०७९, बिहीबार १३:००
Marketing: [email protected]ki.com